I-Lakeside cottage ecaleni kweLinnansaari National Park - I-Airbnb
I-Lakeside cottage ecaleni kweLinnansaari National Park
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguTarmo
UTarmo ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Indlu esandula ukulungiswa ngokupheleleyo kwaye inezixhobo zangoku isecaleni kweLinnansaari National Park, ngasemanzini otywino. Umgama kwiinkonzo zabakhenkethi ze-Oravi yi-4 km kunye ne-Savonlinna 45 km. Ngokukodwa ezifanelekileyo kwiintsapho, abalobi kunye nababhexi.
Le cottage ihlaziywe ngokupheleleyo kwaye ixhotyiswe kakuhle ikufuphi neLinnansaari National Park, iikhilomitha ezi-4 ukusuka kwiLali yaseOravi, iikhilomitha ezingama-45 ukusuka eSavonlinna. Ngokukodwa ilungele iintsapho kunye nabantu abanomdla ekulobeni kunye nokuhamba ngephenyane.
Phantsi amagumbi amabini okulala. Zombini zineebhedi ezimbini kunye nebhedi yesofa kwigumbi lokuhlala. Kukho malunga ne-68 m2 yendawo engezantsi kwaye ngaphezulu kwe-40 m2 phezulu. Indawo yokulala ephezulu ineebhedi ezimbini kunye nesofa yegumbi lokuhlala inokwandlalwa kwibhedi ephindwe kabini.
Kukho amagumbi amabini okulala ezantsi aneebhedi ezimbini kunye nebhedi yesofa kwigumbi lokuhlala. Umgangatho ongezantsi yi-68 m2 kwaye umgangatho ophezulu ungaphezulu kwe-40 m2 kunye neebhedi ezimbini kunye nebhedi yesofa.
Ikhitshi ixhotyiswe kakuhle kwaye itafile yayo ifanelekile kwiqela elincinci ukuba lidle. Ukutya okuninzi, itafile kufuneka ibekwe kwicala legumbi lokuhlala, elinokwandiswa ukuba kuyimfuneko. I-terrace inetafile yokutya kunye ne-grill grill.
Kukho iijingi kwi-patio kunye nolwandle.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngomatshini wokuhlamba izitya. Unokufumana isidlo sakusasa apho ujonge echibini kwaye kukho indawo eninzi yabantu yokutyela kwigumbi lokuhlala. Kukho indawo eninzi kwi-terrace kunye nepatio ukuze ube ne-barbeque.
Ukongeza kwi-sauna yombane, i-cottage ine-sauna yaselwandle eyahlukileyo.
Ukuba uthanda ukuba nesauna ungakhetha phakathi kwesauna yangaphakathi yombane kunye nesauna yaseFinnish esecaleni kwechibi.
I-cottage inesikhephe somgxobhozo, apho siqesha iinjini ezi-5 zamandla eenjini. Ukongezelela, siqesha izikhephe zokuloba ezingama-20 ezivela eKalapa ezinenjini yamahashe. Abo banomdla bayabongozwa ukuba bazibhukishe kwangethuba.
Kukho isikhephe sokubheqa simahla, kwaye ukuba unomdla kwimoto engaphandle (5hp), ungayirenta nge-50 € / ngeveki. Ukuba unamava athile ngesikhephe esinenjini kuyenzeka ukuba urente isikhephe esine-20 hp motor. Nceda ubuze kwangethuba.
Oomatse bayafumaneka ukuze baqeshe amaphenyane.
Kukho isikhephe kunye neKayak Renting eOravi.
Iinkonzo zabakhenkethi zika-Oravi, iingcebiso, ukurenta izixhobo, ukuthengiswa kweemvume zokuloba kunye nokuthenga zimalunga ne-4 km kude. Ikwafikeleleka lula ngamanzi. Ukusuka apho, thatha iteksi yesikhephe ukuya eLinnansaari.
Iziko lemisebenzi yangaphandle yaseOravi yi-4 km ukusuka kwindlwana kwaye ungafikelela kuyo nangephenyane. Ungathenga ukutya, utye kwindawo yokutyela, uthenge iilayisensi zokuloba kwaye uqeshe amaphenyane kunye neekayak. Ukongeza, inkonzo yeteksi kwisikhephe ukuya eLinnansaari inokwenzeka ehlotyeni.
Umbuki zindwendwe ngu- Tarmo
Olen luonnossa viihtyvä ja matkailua harrastava tee-se-itse-mies. Haluan, että vieraani viihtyvät mökillämme ja nauttivat Järvi-Suomen rauhasta ja puhtaudesta. sekä nauttivat sen luonnon antimista.
Siya kufumana abaqeshi ngobuqu ukuba kunokwenzeka kwaye sikukhokele ngokusebenzisa i-cottage. Ngokwenene sihlala kude kancinane, kodwa sinokufikelelwa ngomnxeba.
Siza kudibana neendwendwe zethu ngokwabo, ukuba kunokwenzeka, kwaye siya kukubonisa indlela yonke into esebenza ngayo kwi-cottage. Ngaphandle koko ungasifumana ngefowuni okanye nge-imeyile.